Le yiSony Xperia 1 entsha eboniswe kwi-MWC | Iindaba zeGajethi
Le yiSony Xperia 1 entsha eboniswe kwi-MWC
UJordi Gimenez | | Imiboniso
U-Sony waphinda wasenza savuka kwangoko kumnyhadala wefowuni obhekisa kuwo, i-MWC. Inkampani iphehlelele ukubonakaliswa kweflegi yayo, ngeli xesha Ukushiya bucala igama le-XZ kwaye uye ngqo ubizwe ngokuba yi-Xperia 1. Ngale ndlela ifemi ishiya bucala into ebihamba nayo ukusukela oko yaqalwa kodwa ayishiyi manani kunokwenzeka ukuba ekuhambeni kwexesha izisole kwaye ibuyisele la magama afanelekileyo "XZ" kwizixhobo zayo, okanye hayi.
Ngayiphi na imeko, into esinayo namhlanje kusuku lokuqala lwe-MWC yintshukumo eninzi ithathela ingqalelo ukuba iintsuku ezomeleleyo bezizolo ngeCawa, namhlanje usuku alusileli. Siqale ngo-8: 30 kusasa kwaye uSony usibonise isixhobo esinoyilo oluthile kodwa ingeyiyo into eyahluke mpela kuleyo sele siyazi malunga nophawu. Masibone ezinye zezona nkcukacha zibalulekileyo zale Xperia 1 intsha.
1 I-Xperia 1 enesikrini se-4k
2 Ikhamera kathathu ngasemva
I-Xperia 1 enesikrini se-4k
Kwabaninzi kunokuba kungafuneki kwaye kwabanye kube khona ukuvela kwezinto kwii-smartphones zabo. U-Sony ubeke bucala isikrini esine-intshi ezi-6 ukongeza isiqingatha se-intshi ngaphezulu kule modeli ifikayo ukuya kuthi ga kwi-intshi ye-6,5 ngomlinganiso wezinto eziguqulweyo ukuya kuthi ga kwi-21: 9 enkosi ekunciphiseni isakhelo sangaphambili. Yongezwe kwinto yokuba yiphaneli ye-OLED ene 4k isisombululo Kukwenza woyike malunga nomthamo webhetri yakho kwaye ukuba uyakubamba umsebenzi wosuku, kuyo nayiphi na imeko inkampani iqinisekisa ukuba iyayenza.
Xa sithetha ngeeprosesa inkosi kule MWC 2019 ngokungathandabuzekiyo yi Qualcomm Snapdragon 855 kwaye uSony akakude ngasemva kule nkalo ukongeza eyona processor inamandla. Kwelinye icala sibona indlela intsingiselo yeefemu ezininzi ukongeza i-RAM kwizixhobo zazo kwaye kule meko i-Xperia entsha ayifikeleli kwi-12 GB kodwa Benyuka ukusuka kwi-4 GB yemodeli edlulileyo ukuya kwi-6 GB ye-RAM.
Umthamo wale Xperia 1 intsha inyuka ukusuka kwi-64GB ukuya kwi-128GB yeemodeli zokungena ukuze u-Sony naye aqine kwimicimbi yamandla. Kwelinye icala, yongeza ukhetho lweememori khadi ukuba abanye abavelisi bayishiya bucala kwaye kule meko ubuninzi be-512GB.
Ikhamera kathathu ngasemva
Ukubheja kukaSony kukwakwikhamera kathathu ngasemva ene-intshi ye-1.6-intshi yokuvula, i-angle ebanzi kunye neTV. Kule meko sinayo isivamvo esingama-26mm kwi-engile ebanzi, i-16mm kwi-engile ebanzi kunye ne-52mm yefowuni eyenza ikhamera yale Xperia entsha ibe sisixhobo esihle sokuthatha iifoto. Into engasothusi nathi. Ngaphambili sifumana isivamvo se-1MP ngaphandle kwe-autofocus.
Sifumene isiqinisekiso se-IP68, a Ibhetri ye 3.300 mah Oko kubeka amathandabuzo kumandla okufikelela esiphelweni sosuku ngescreen esingaphezulu kwe-6 ″ AMOLED kunye ne-4K, kunye neglasi yeGorilla Glass 6 ekhusela izixhobo. Kuyilo sibona utshintsho oluncinci xa kuthelekiswa neemodeli zangaphambili ezingaphezulu, kodwa ayilulo utshintsho olukhulu nokuba. Ngendlela, ukusuka ku "Songa" akukho nto kwi-Sony.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imiboniso » Le yiSony Xperia 1 entsha eboniswe kwi-MWC
Sithelekisa i-Samsung Galaxy Fold kunye neHuawei Mate X
IHuawei Mate X, ifowuni entsha esongiweyo emi kwiGold Fold